को हुन् विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी एकता अधिकारी ? – जलजला अनलाइन
Posted on March 11, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on को हुन् विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी एकता अधिकारी ?
फागुन २७, काठमाडौँ । इथियोपियामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने एकता अधिकारी गोरखाको साबिक मिरकोट गाविस–३ की बासिन्दा हुन् ।
२८ वर्षीया अधिकारीका बुवाआमा काजी अधिकारी र आमा पार्वती मिरकोटबाट सरेर गोरखा नगरपालिका–१० छेपेटारमा बस्दै आएका थिए । उनीहरु अहिले काठमाडौंको बालाजुमा बस्दै आएका छन् ।
अधिकारीका कान्छा काका ध्रुव अधिकारीका अनुसार एकताका दुईजना दिदी अमेरिकामा छन् भने एक जना भाइ बालाजुस्थित घरमा छन् । एकताको मृत्युको खबर पाएपछि हाल अमेरिकामा दुई छोरीका साथमा रहेका आमा र बुवा नेपाल फर्कदै छन् ।
एकताले काठमाडौंस्थित सेण्ट मेरिज स्कूलबाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेकी हुन् । एकता बेलायतबाट एमएससी सकेर चार वर्ष अघि नेपाल फर्केकी थिइन् ।
२०७२ सालको भूकम्पदेखि विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लुएफपी) मा आवद्ध भएर नेपालमा काम गरेकी अधिकारी आठ महिना अघि इथोपियामा काम गर्न पुगेकी थिइन् ।
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा आइतबार यात्रुवाहक जहाज दुर्घटनामा पर्‍यो। सात समुद्रपारिको यो घटनाको आइतबार साँझसम्म नेपालसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। तर आइतबार रातिदेखि त्यही घटनाले नेपालमा पनि शोक परेको छ।
इथियोपियाको आदिस आबाबामा आइतबार जहाज खस्दा गोरखा छेपेटारकी २८ वर्षीया एकता अधिकारीको निधन भएको छ। उनी विश्व खाद्य कार्यक्रम इथियोपिया कार्यरत थिइन्।
‘एमएसी गरेर युएनमा नाम निकालेर काम गर्दै थिइन्,’ एकताको ठूलाबुवा ईश्वरबाबु अधिकारीले भने, ‘तर राम्ररी करिअर बनाउन नपाउँदै दुर्घटनामा परिन्।’
‘दाइभाउजु अमेरिका हुनुहुन्छ। नेपाल आउन सक्नुभएको छैन। आउनुहुन्छ,’ एकताको काकाले भने, ‘अन्तिम संस्कारसहितका काम काठमाडौंमै गर्ने भन्ने छ। अहिले केही तयारी छैन। शव आउन समय लाग्ला।’
देशभर अझै तीन दिन वर्षा हुने, सतर्क रहन सबैलाई आग्रह
Posted on July 12, 2018 Author Jaljala Online
असार २८, काठमाडौँ । आगामी तीन दिनसम्म देशभरि नै बद्ली रही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानबारे विज्ञप्ति जारी देशभर हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने र पूर्वका केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुनसक्ने सम्भावना पनि औँल्याएको हो । आज देशभरि नै बद्ली रही मध्य र […]
कहाँ थिए श्याम खत्री, किन गरे आत्मसमर्पण
Posted on June 1, 2018 June 1, 2018 Author Jaljala Online
जेठ १८, काठमाडौं । तस्करीको साँढे ३३ केजी सुन र सनम शाक्य हत्या अभियोगमा नेपाल प्रहरीका पुर्वडिआईजी गोविन्द निरौलादेखि एसपी बिकासराज खनाल र डिएसपी संजय राउतसम्म पक्राउ परेपछि एसएसपी श्यामबहादुर खत्री एकाएक भुमिगत भएका थिए । खत्री खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतको देहरादुन गए । केही महिना उतै लुके । तर, उनले त्यहाँ पनि आफुलाई […]
कैलालीमा भयानक दुर्घटना: दुई दर्जन बढी घाइते, तीन जनाको अवस्था गम्भीर (तस्बिरसहित)
फागुन ५, कैलाली । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर–१३ अत्तरियाबजारनजिकै शनिबार दिउँसो एक यात्रीबहाक बस दुर्घटना हुँदा दुई दर्जन बढी घाइते भएका छन् । टीकापुरबाट धनगढी आउँदै गरेको कर्णाली यातायातको ना४ख ८६३६ नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी दुई दर्जन बढी घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार घाइतेमध्ये […]